फेसबुकमा पोष्ट गर्नुप¥यो नि ‘दुर्घटनामा परेका दुइलाई उद्दार गरियो ३समाजसेवा’ । विचरा त्यो व्यक्ति जसलाई चोट लागेको छ, अस्पतालमा भर्ना भएको छ तर घरसम्म कुरा पुर्याउन सक्दैन् । त्यसको लागि त त्यो फेसबुक र फेसबुकवाला महान भयो । तर एकपटक सोचौं यदी कोही मानिस बाहिरबाट कामको सिलसिलाले सहर केही रहर बोकेर आएको हुन्छ र दुर्घटनामा केही सानो चोटपटक लागेर घाइते हुनपुग्छ । उसलाई त्यो सानो खबर घरसम्म सुनाएर किन परिवारलाई चिन्तित बनाउने भन्ने लागि रहेको बेला उसलाई घरबाट आत्तिँदै फोन आउँछ बाबु के भयो तलाई यो फेसबुकमा त ‘दुर्घटनामा चोट लागेर घाइते’ भनेर तेरो फोटो हालेको छ । त्यति बेला त्यो फेसबुक र फेसबुकवाला उक्त व्यक्तिको नजरमा के होला ?
लहर छ आजभोलि फेसबुकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहे लुगा लगाइमा होस् वा होटलमा गएर खाने कुरामा । अनि पोष्ट गरिन्छ ‘आज धेरै पछि मःमले बोलायो फिलिङ्ग हङ्ग्री’ भोक लागेको भए उसले मःम खानलाई बोलाएको हो की मःमले उसलाई ।
त्यस्तै आजभोली सबैभन्दा नराम्रो लहर चलेको छ बाबुआमाको प्रदर्शनी । आमाको मुख हेर्ने दिन मातातिर्थ औंशीमा आमाको फोटो प्रदर्शनी हुन्छ, अनि बाबुको मुख हेर्ने दिनमा बाबुको फोटो प्रदर्शनी चल्छ । तर विचरा कतिपय बाबुआमालाई फेसबुक भन्ने कुन चराको नाम हो त्यो पनि थाहा हुन्न ।
हामीहरु बिहानै उठेर कहिल्यै नदेखेका भगवानको थानलाई सफा गर्छौं, दियो बाल्छौं, पानी चढाउछौं अनि दुई हात जोडेर सात्सांगत द्वण्डवत प्रणाम गर्छाैं । भनेको लम्पसार परेर बिहानै फोटो तथा मुर्तिको पुजा गर्छौं । तर आफ्ना बाबुआमालाई कहिल्यै के छ कसो छ भनेर सोध्ने गरेका हुदैनौं, खाना के खान मन छ भनेर त कहिल्यै सोध्दैनम् । केहि छ भने पनि आफ्नो मन लागेको खाना वा वस्तु टर्काउछौं ।
अरु त अरु भैगो आमा र बाबुको मुख हेर्ने दिनमा पनि आफुलाई मन लागेको कुरा दिएर उहाँहरु खुसी भएको हेर्न चाहन्छौं । हामीहरुलाई थाहा नभएरै होला बुबाआमालाई बर्षको १ दिन महङ्गा वस्तु दिन्छौ अनि बर्षभर बिर्सिदिन्छौं । तर आमाबुबालाई महङ्गा वस्तु होइन माया र ममताको खाँचो हुन्छ त्यो त हामीसँग समय नै हुँदैन ।
सायद बुबाआमासँग समय नभएकै कारण हामी यहाँसम्म पुगका हौं ? हामीले आफ्नो सन्तानलाई जसरी तन, मन, धन सुम्पिन्छौं, त्यसरी नै हाम्रा बाआमाले नि सायद त्यसै गरेका होलान । हामी अहिले आफ्ना सन्तानलाई त्यही गरिरहेका छौं । तर पनि हाम्रो सोच कहिल्यै बदलिन्न् त्यसै कारण आमाबुबाले कति दुःख गरेर हामीलाई यहाँ सम्म पुर्याउनुभयो भन्ने चटक्क र्बिसन्छौं र भन्छौ मेरो लागि मेरा आमाबुबाले केहि गरेनन् गरेको भएआज म कहा पुग्थें ।
समयको चक्रमा त्यो दिन फेरी फर्किन्छ र अहिले आमाबुबाको ठाउँमा आफु र आफ्नो ठाउँमा सन्तानलाई राखेर सोच्नै बिर्सन्छन् । अनि बुढेसकालमा बसेर यो मेरो छोरो भनौदोले मलाई वास्तै गरेन् भन्छन् । जुन कुरा बच्चैदेखि सिकेको हुन्छ बच्चाले त्यहि कुरा गर्न नखोज्दा–नखोज्दै पनि भैरहेको हुन्छ ।
आफ्नो परिवार रहेका बालबच्चालाई बाबुआमाको माया र संस्कारले मात्र पुग्दैन् । घरमा रहेका बुजुर्गहरुको पनि माया, ममता र स्नेहको खाँचो पर्छ, जुन अहिलेको वर्तमान परिस्थितिले गर्दा सबैले जान्न जरुरी छ । छोराछोरी एउटा सानो बिजुलीबाट चल्ने यन्त्रमा रमाइरहेका छन् ।
घरमा कोठा थुनेर बस्ने बानी परेको छ । हजुरबा हजुरआमा फोटोमा मात्र राम्रो लाग्न थालेको छ । उहाँहरुले सिकेका कुराहरु हामीलाई सुम्पने प्रथा पनि हट्दै गएको छ । दिनभरीको व्यस्थता र बाँकी फुर्सदको समयलाई आजको सामाजिक सञ्जालले बनाएको व्यस्थताले गर्दा हामी हाम्रो अस्थित्व नै मेटाउन लागिरहेका छौं कि ?
हामीले गरेको सानो गलत प्रयासले हाम्रा नानीबाबुहरु प्रविधिको नाममा समाजबाट एक्लै बस्न बाध्य हुनेछन् ।